Sarudzo dzakawanda muSpain: maitiro emusika | Ehupfumi Zvemari
Sarudzo huru muSpain: maitiro emusika
Kamwe kumwe kwekusahadzika kwakachengetedzwa nevashambadzi vadiki nepakati muSpain, iyo yakabatana nesarudzo dzakaitika Svondo yapfuura iyi yakagadziriswa. Kupi iyo PSOE ndiyo yakahwina yesarudzo, inosvika pazvigaro zana nemakumi maviri nematatu, nerutsigiro rwe123% yevavhoti. Nepo pane izvo zvinopesana, huwandu hwepakati-kurudyi mapato akawira kure nekukwanisa kuumba hurumende. Ikozvino zvinongoramba zvakagadziriswa kuti Mutungamiriri Sánchez aumbe hurumende nemamwe mapato ekuruboshwe kana kana, zvinopesana, anozobvumirana necristrist simba reCiudadanos.
Mhedzisiro yesarudzo isiri kukanganisa misika yemari zvakawandisa, kunze kwenzvimbo dzemusika wemasheya dzinotarisisa chiitiko chezvematongerwo enyika ichi. Sezvazviri, semuenzaniso, mabhangi nemakambani emagetsi Kana ivo vakaona kuti mitengo yavo yakakanganiswa sei nemhedzisiro yesarudzo idzi dzakaitika kuSpain. Nzvimbo yevaongorori vezvemari haina kujeka chero, nekuti vamwe vanofunga kuti musika unogara uchitya nehurumende dzeruboshwe.
Ndichiri pane imwe, pane mimwe mifungo isingatorerekete pakuratidza kuti musika wemari ichafambiswa nezvinhu zvepasirese, kwete nekuda kwesarudzo. Chimwe chinhu icho kune imwe nhanho chakajairika pasirese seyakaumbiridzwa seyazvino uye apo mamiriro ezvehupfumi epasi rose anorema zvakanyanya mumasarudzo evashambadziri kupfuura sarudzo dzenyika. Kubva pamaonero akajairika, hazviite senge sarudzo muSpain dzinozove nehuremu hwakanyanyisa kukoshesesa indekisi yekuSpain, iyo Ibex 35. Kana iri pfupi chete nguva, ndiko kuti, mumazuva ekutanga revhiki rino.
1 Sarudzo: mhedzisiro yesarudzo
2 Ibex haigare zvakanaka nesarudzo
3 Ibex 35: kuderera kuderera
4 Mirira kutaurirana
5 Kuita mumazuva mashoma anotevera
Sarudzo: mhedzisiro yesarudzo
Munguva yemaawa mushure mekuburitswa kwesarudzo dzesarudzo, pakange pasina kushaikwa kwemanzwi kubva kuvakuru vemari vakuru mavanoratidza kuti mhedzisiro inofanirwa kuvimbisa misika kusiyanisa mari. Mupfungwa yekuti chakasiyana chinhu nezvematongerwo enyika uye chakasiyana chikamu chemari. Zvakare, hazvigone kukanganwika kuti musika wepasi rese wemusika wave uchishandiswa kutamba neakakunda sarudzo dzakakosha kuSpain, iyo PSOE. Chimwezve chikonzero chinomanikidza chekufamba kwakanyanya uye kwakadzikama mumapaki emunyika.
Nepo kune rimwe divi, hazvigone kukanganikwa pachiitiko ichi kuti mhedzisiro iyi inogona kubatsira kubvisa kusahadzika kwakange kuripo muchikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Mupfungwa yekuti inogona kuburitsa kumuka kana mazuva mashoma apfuura nemisika yemari shandisa mhedzisiro iyi. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuwana kutenga kwemasheya pamakwikwi emitengo yakawanda kupfuura nakare, kunyangwe kana misiyano yavo iri shoma, sezvingaonekwa mazuva ano.
Ibex haigare zvakanaka nesarudzo
Kune rimwe divi, hazvifanirwe kukanganikwa kuti indekisi inosarudzika yemari yenyika, Ibex 35, nguva dzose yadonha mu100% yeiyo mashure mesarudzo mushure megore ra1992. Asi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti muzviitiko zvese pakave nekushandurwa kwehurumende uye nguva ino yanga isiri iyi. Kana zvisiri, pane kudaro, zvakafanana izvo zvataive nazvo pamberi pesarudzo munyika medu. Uye ichi chokwadi chinogona kudzikisira kuderera mukukoshesa kwemasheya mumazuva anotevera. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kunyatso kuve vasina kukosha.
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, zvinoita sekunge hapana chekutya kune vadiki nevepakati varimi vanofanirwa kuve nehanya nezvimwe nyaya. Semuenzaniso, kuti iyo Ibex 35 inoremekedza rutsigiro rwakakodzera rwainarwo pamatanho e9.100 kana 9.200 mapoinzi. Nekuti inogona kuve nhanho yekukwira kutsva kwekudzika muzvikamu zveSpanish. Kunyanya kuziva mamwe mabhegi ari kunze kwemiganhu yedu kupfuura kwesarudzo pachavo. Mune izvo zvakagadziriswa sepanorama rinotungamira pazuva rakatevera kusarudzwa kwakakosha uku.
Ibex 35: kuderera kuderera
Iyo yakasarudzika index yeSpanish equities, zvinoita sekunge haina kukanganiswa nemhedzisiro yesarudzo. Nekuderera kwezuva chete zvino nezvikamu zvishoma zvegumi muzana zvine chekuita nemutengo wayo. Chinhu chinofanirwa kutarisirwa sechajairwa zvachose uye mukati memafungiro ese. Uye zvakanyanya kukosha, zvinoenderana neyakajairwa seti nedzimwe nzvimbo dzemunyika munzvimbo yedu. Pasina iko kuve nekufamba kwekukosha kwakakosha mukuumbwa kwemitengo. Beyond iyo inonzwisisika misiyano neimwe nzira kana imwe.
Nepo kune rimwe divi, kwave kusati kwave neanonyanya kunetsekana masheya emakesi kusimuka kana kudonha nekuda kweichi chokwadi chezvematongerwo enyika. Ndokureva, zvese zvakanyarara kune vashoma nevepakati varimi, pasina iyo isingabatsire pamabasa avo ekutengesa sekufunga kunoita mumwe pakupera kwesvondo. Kuve, kune rimwe divi, zuva rakafanana nevakawanda muzvikamu zvekupedzisira zvemusika wemasheya. Uine kondirakiti vhoriyamu kuti inofanirwa kuverengerwa seyakajairika pamisi iyi yegore. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha zvekuchengetedzwa kwepachena.
Uku kuiswa mumitengo yemitengo yemitengo kunodudzirwa nevamiriri vemari sekambasi yekumirira pamberi pe kutaurirana nemamwe mapato ezvematongerwo enyika uye vagadzire hurumende mumwedzi inotevera. Panogona kuve nekiyi yekuvandudza imwe nzira yekudyara kuti mari ichengetedze munguva ino yegore. Nepo kune rimwe divi, kutarisisa kwevatengesi vese kunonangidzirwa kune zvimwe zvakakosha zvemisika yemari. Semuenzaniso, mutemo wezvemari kumativi ese eAtlantic. Nezve apo mitengo yezvibereko inogona kukwira uye pasi pechidoi mafambiro emari aya achaitwa.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti musika weSpanish wemusika, uye kunyanya iyo Ibex 35, iri panguva yakakosha kwazvo kune yayo tsananguro imwe nzira kana imwe. Uye chero mutsauko mukushandurwa kwemitengo kunogona kutungamira kune yavo miitiro kuve vari bearish kana yekusimudzira. Nezvakakosha zvine hungwaru zvine chekuita nevashambadzi vadiki nepakati. Hazvishamise kuti, panguva ino isu takatarisana nemamiriro ekusava nechokwadi uye izvo zvinogona kukuvadza vashandisi kutora imwe nhanho nezve izvo zvavanofanirwa kuita mumisika yemari.
Kuita mumazuva mashoma anotevera
Chero zvazvingaitika, hapazove nesarudzo kunze kwekunyatsoteerera zvinogona kuitika mumazuva anouya, kunyangwe tichiziva kuti nyika nevekunze stock exchange ichavharwa neChitatu nekuda kwezororo raMay XNUMX. Uku kuchave kuzorora kudiki kubva pane zvinogona kuitika mumazuva anotevera Nekuti chero shandura nhaurirano zvinogona kureva shanduko mune zvinoitika mumisika yemari. Beyond the state of its current technical element iyo kusvika parizvino haina kushata zvachose. Nema indexes ese akanaka mumwedzi mina yekutanga yegore, chimwe chinhu chakange chisina chikamu chikuru chevanoongorora mumisika yemari iyi.
Asi chero zvakadaro, pane chinhu chimwe icho vashoma uye vepakati-saizi masimendi akajeka kwazvo nezvazvo, uye ndezvekuti ivo vanoziva zvimwe zvinhu kunze kwekuvandudzwa kwehurumende pachayo muSpain. Iko isingakwanise kukanganikwa kuti mwedzi mishoma inotevera ichave yakakosha yekuziva kuti misika yemari iri kuenda kupi. Zvese zviri munyika medu nekunze kwemiganhu yedu uye zvichave zvakakosha kuita danho rekutora chinzvimbo mumisika yemari kana kwete. Zvichakadaro, hakuzove nesarudzo kunze kwekumirira zvishoma uye kana paine chero chinhu, ita imwezve yekutengesa yezvemari nekungwarira kukuru. Nekuti njodzi dziripo uye zvinogona kutiita kuti titambe zvekare hunyengeri chero nguva.
Zvekutendeseka kwakakura ndeimwe nhevedzano yezviratidzo zvinoratidza nguva yakakodzera yekutenga kana kutengesa pamusika wemasheya. Chimwe chezviratidzo izvi mipengo, iyo nenzira yakajairika, inowanzo rondedzerwa senzvimbo kana mutengo wemitengo umo pasina kushanda kwakaitika. Semuenzaniso, mune yekumusoro tinogona kuti pane mukaha mune chati chezuva nezuva kana pasi pemumvuri wezasi wezuva rimwe uri pamusoro pepamusoro pemumvuri wezuva rapfuura. Mune downtrend kukwirira kwemumvuri wezuva rimwe kwaizove kwakaderera pane kushoma kwemumvuri wezuva rapfuura. Mutsetse uyu, kuti pawane mukana wepamusoro wekukura pane chati yevhiki kana yemwedzi, zvingave zvakakosha kuti chikamu chepasi chakanyorwa mukati mevhiki kana mwedzi kuve chakakwirira kudarika chakanyanya kusvika svondo rapfuura kana mwedzi zvichiteerana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Sarudzo huru muSpain: maitiro emusika
6 mibvunzo varimi vanogona kuzvibvunza ivo